Polycarbonate | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny endriky ny endriky ny trano fonenana polycarbonate, manadihady ireo safidy hividianana
Ny polycarbonate ny trano fonenana efa ela no nahazoana alalana tamin'ny mponin'ny lohataona, ny fametrahana azy dia tsy mitaky fotoana sy ezaka betsaka, ny vidiny dia tsy lehibe. Ankoatr'izany, ny tsena dia manana karazan-tsiran-kevitra marobe, izay ahafahanao misafidy ny safidy mety aminao. Tombontsoa tokana Ny trano fonenan'ny polycarbonate tokana dia mitazona lanja matevina amin'ny lanezy, tsy sarotra ny mametraka azy ary manana faharetana avo lenta.
Ny voka-tsoa sy ny fiheveran'ny karazana fototra ho an'ny fambolena polycarbonate
Ny polycarbonate ny trano fonenana efa hatramin'ny ela no nanorina ny tenany. Ny fototry ny fananganana azy dia manana fahasamihafana amin'ny fitaovana misy azy, amin'ny vidin'ny fanorenana sy ny kalitao. Na izany aza, tsy mora ny manapa-kevitra hoe iza no fototra azo alaina amin'ny fametrahana ny trano fonenana polycarbonate. Noho izany, mendrika ny mijery ny karazana fototra ary misafidy izay iray aminao.
Ahoana ny fametrahana polycarbonate amin'ny metaly metaly
Ny olana mikasika ny fametahana polycarbonate amin'ny metaly iray dia mahaliana ny mpamboly matihanina, fa ireo mpitrandraka tsotra ihany koa, satria avy amin'io fitaovana io no ahafahanao manamboatra trano fonenana ho an'ny zavamaniry. Mazava ho azy, dia ho afa-manome vokatra mahafa-po ianao raha tsy efa fantatrao mialoha ny hetsika rehetra ilaina, fa hanampy amin'izany izahay amin'izao fotoana izao.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Polycarbonate